CC Shakuur oo loo doortay xildhibaan federal + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar CC Shakuur oo loo doortay xildhibaan federal + Sawirro
CC Shakuur oo loo doortay xildhibaan federal + Sawirro
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa goordhow loo doortay xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya, kadib doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.
Guusha Cabdiraxmaan ayaa dhabar jab ku ah Villa Somalia oo isku deyday inay kursigan ka reebto, maadaama uu ka mid yahay xubnaha ay sida aadka isugu hayaan Farmaajo.
Doorashada ayaa haatan sii soconeyso waxaana la guda-galayaa saddexda kursi ee kale ee loo qorsheeyey in isla maanta lagu qabto caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb.
Kursi ka mid ah kuraastan waxaa sidoo kale loo xiray Cabdullahi Aadan Kulane oo ka mid ah saraakiisha sar sare ee NISA, kaas oo ah Hop#040 ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa dardar ku socota, waxaana uu qorshuhu yahay in lasoo gabagabeeyo, ka hor 25 bishan Febraayo ee sanadka 2022-ka.